रमाइलो छ…नै किन ? « Ramailo छ
रमाइलो छ…नै किन ?
नेपाली फिल्मको निर्माणको रफ्तार र बजार फराकिलो हुँदैछ । सँगै फिल्म पत्रकारिता, त्यसमा पनि फिल्मी अनलाईनको संख्या उल्लेखनीय रुपमा बढिरहेको छ । देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा बसेका फिल्म प्रेमीले पनि अनलाईन सञ्चालन गरिरहेका छन् । जुन आफैंमा सकारात्मक हो । तर अनलाइन पत्रकारिताले साख बचाउन र सत्य/तथ्य तथा स्तरिय समाचार सामग्री पस्कन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
स्वीकार्नु पर्ने तीतो–सत्य, यो आरोपमा सत्यताको पल्ला भारी छ । अब यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, त्यसो भए यो भीडमा रमाइलो छ डटकम किन मिसियो ? खासमा हाम्रो मुख्य उद्येश्य नै त्यही हो, अनलाइनप्रति पाठक/दर्शकको अपेक्षाको जुन खाडल छ, त्यसलाई पुरा गर्ने । त्यो पनि पूर्ण व्यावसायिक तथा स्वतन्त्र तवरबाट । जहाँ सत्य तथ्य र विश्वसनीय सामग्रीलाई प्राथमिकता दिइन्छ, लहड र चर्चाकै खातिर सस्ता समाचारलाई कहिल्यै पछ्याउदैनौं । यो हाम्रो तपाईंहरुसँगको प्रतिबद्धता हो ।
सँगै हामीलाई लाग्छ, फिल्मी पत्रकारिता अन्य बिटको पत्रकारिता भन्दा पृथक हुन्छ, धेरै हदसम्म विशेष पनि । कारण, समाचार मार्फत सुचना र जानकारी दिनु त पर्छ नै । त्यसका अलवा सेलिब्रेटीका रमाइला र रोचक प्रसंगलाई रसिलो र रमाइलो शैलीमा पस्कनु पनि हाम्रो जिम्मेवारी भित्र पर्छ । अर्थात, समाचार र मनोरञ्जन एकसाथ । हो, हामी पाठक र दर्शकको यो अपेक्षामा निराश पार्दैनौं । सकेसम्म छिटो र मिठो समाचार पस्कने प्रयासमा हुनेछौं सदैव ।
आजकल युट्यु्ब ग्लोबल प्लेटर्फमको रुपमा जर्बजस्त स्थापित भइरहेको छ । विदेशमा बस्ने नेपाली मात्र होइन, स्वदेशमै पनि धेरै भन्दा धेरै नेपाली युट्युबमा इन्गेज भइरहेका छन् । र, यो दर दिनानुदिन बढ्ने छ किनभने इन्टेरनेटको पहुँच सुलभ हुँदैछ । युट्युबको यो बढ्दो प्रभावकारिता हामीले नजरअन्दाज गर्ने कुरै भएन । भन्नुको मतलब हामीले युट्युबलाई अडियन्स पुग्ने दरिलो माध्यमका रुपमा आत्मसाथ गरेका छौं । युट्युब भिडियोहरुमा औपचारिक भन्दा अनौपचारिक शैलीलाई पछ्याइने छ । यही शैली तपाईंहरु माझ प्रिय हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
फिल्म उद्योग बिस्तार र विकास भए मात्र फिल्मी पत्रकारिताको महत्व बढ्छ । यसको मतलब स्तरिय फिल्मलाई प्रोत्साहन गर्दैै दर्शकलाई आकृष्ट गराउन् अनि स्तरहिन फिल्मलाई निरुत्साहित गर्नु पत्रकारिताको धर्म हो । यसलाई व्यवहारमा उर्तान कति पनि कन्जुस्याई गर्नेछैनौं । र, यी सबैं दायित्व पुरा गर्न हामीलाई तपाईंको साथ, सहयोग र शुभेच्छा आवश्यक छ । अनि त्यो माया पाउनेमा ढुक्क छौं किनभने हामी पेशागत मर्यादामा रहनेछौं हरपल । यो हाम्रो आत्मविश्वास र प्रतिबद्धता दुवै हो ।
रमाइलो छ डटकम